Momba anay - Shijiazhuang Shencai Pigment Factory
Shijiazhuang Shencai Pigment Factory natsangana tamin'ny taona 2003. Manana tobim-pamokarana vy oxygères lehibe izahay (Hebei Chengyu Pigment Co., Ltd), hita ao amin'ny valan-javaboarin'i Chemical Chemical Ningjin sira, faritany Hebei, faritany indostrialy simika simika, dia ofisialy ao famokarana. Miaraka amin'ny tsipika famokarana telo, 50.000 taonina ny famokarana isan-taona.
famokarana mena vy oxide, vy oxide mavo, vy oxide mainty, vy oksida maitso ary pigment andiana vy oxide hafa, ampiasaina amin'ny loko amin'ny loko, fitaovana fananganana, fingotra plastika ary paty miloko mifototra amin'ny rano, fitaovana fanosotra haingon-trano. Ekipa Teknika R&D manokana ary Laboratoara matihanina, mampiasa fitaovana fanandramana mandroso, hiantohana ny famokarana vokatra tsirairay misy kalitao milamina. Ny filoha Gu zhihe dia miarahaba ny olona avy amin'ny lafim-piainana rehetra hitsidika ny orinasa hiresaka sy hikatsaka fampandrosoana iraisana. Izahay no vidiny tsara indrindra sy serivisy kalitao tsara indrindra miverina amin'ny mpanjifa taloha sy vaovao.
Niorina tamin'ny 1985 ny pigment Shijiazhuang Shencai
Voasoratra ara-panjakana tamin'ny 2003 ny orinasa
Ny tobim-pamokarana mavo oksida vy voalohany dia naorina tamin'ny taona 2004, miorina ao amin'ny Valan-javaboary any Guzhuang, Tanànan'ny Shangzhuang, Distrikan'i Luquan, Shijiazhuang, izay misy vokatra 10000 taonina isan-taona.
Tamin'ny 2016, ho setrin'ny politikam-pirenena momba ny fiarovana ny tontolo iainana, dia nisy fototra famokarana pigmentan'ny oksida vy vaovao napetraka tao amin'ny valan-javaboarin'ny simika sira Ningjin .Tamin'io taona io ihany, ny sampana voasoratra anarana Hebei Chengyu Pigment Co., Ltd.
Tamin'ny taona 2017, ny vokatra isan-taona an'ny famokarana vy oksida vy 50000 taonina dia napetraka tamim-pomba ofisialy, ao anatin'izany ny tsipika famokarana pigment oksida vy telo. Tsipika famokarana mavo oxide vy, tsipika famokarana mena oksida vy, tsipika famokarana mainty oksida vy.
Amin'ny taona 2020, hanavao ny fitaovana fiarovana ny tontolo iainana isika ary hanova ny atrikasa famokarana.